Sina mafana amidy rano mandro tsara famonoana kitapo fatoriam-bola ho an'ny mamanina mpihaza tafika sy mpanamboatra | Xueruisha
Ireto kitapo fatoriana camouflage nomerika ireto dia natao manokana ho an'ny tafika, mpikarokaroka, mpihaza ary ireo izay mpankafy miaramila. Misy karazana loko isan-karazany amin'ny safidy, izay mety amin'ny endriny maro isan-karazany, toy ny ala, ala, tendrombohitra sns. Ireo dia vita amin'ny lamba 20lon 380T Nylon, izay tsy misy rivotra, mandroaka rano, mitsahatra, mafana be ary zava-bita tsara hafa. Araka ny fantatsika rehetra, matetika, ny tontolon'ny fitsangatsanganana an-kalamanjana dia mangatsiaka sy mando, ka tena ilaina tokoa ny fikarakarana ny lamba akorandriaka DWR (Durable Water Repactor), izay afaka miaro ny kitaponao fatoriana amin'ny hamandoana amin'ny lafiny lehibe. Azontsika atao ny manamboatra loko, fitaovana, fomba, habe sns, araka ny fangatahanao. Ity kitapo fatoriana ity dia feno ganagana 1200g 90%, ny ankamaroan'ny ozinina dia mampiasa ganagana 85% na gana 80%, mety ho ambany 80%, saingy manizingizina izahay ny hampiasa gana 90% miaraka amin'ny Fanapahana avo 650+, izay afaka manao azy mafana be na dia any amin'ny faritra mangatsiaka aza. Amin'izao fotoana izao, firenena maro any Eropa sy Amerika Avaratra no nanao sonia fifanarahana miaraka aminay, manasa anay hanampy amin'ny famokarana fitaovam-piadiana. Ny fepetra henjana ataon'ny miaramila amin'ny vokatra dia manaporofo fa manana tanjaka matihanina ampy izahay, amin'ny fampiasana akora famenoana kalitao avo lenta sy lamba avo lenta isan-karazany. Mba hiantohana ny kalitaon'ny vokatra, raha manana ny fepetra takiana amin'ny fampiasana kitapo fatoriana ianao ao anaty tontolo matihanina, azo antoka fa afaka mamaly ny fangatahanao izahay. Fantatray lalina fa ny mpanjifa isan-karazany dia samy manana ny filany ary hiezaka mafy araka izay tratra izahay hanomezana izay ilainao. Afaka mamatsy karazana serivisy OEM & ODM isan-karazany izahay sy ny mpanjifanao, noho ny orinasanay manana traikefa 20 taona mahery amin'ity orinasa ity. Raha lazaina amin-kitsimpo dia fantatray izay tadiavinao ary tanterahiny izany.
Ahoana no mifidy kitapo fatoriana?
1. Misafidiana kitapo fatoriana araka ny tarehinao: kitapo fatoriana kely loatra dia ho tery loatra hitodika ary tsy mahazo aina; kitapo fatoriana be loatra dia hisy akony amin'ny fihazonana hafanana raha foana izy ireo.
2. Tandremo ny refin'ny mari-pana ao anaty kitapo fatoriana: mandritra ny fotoana rehetra, ny angona manan-danja indrindra amin'ny fisafidianana kitapo fatoriana dia ny refin'ny mari-pana. Ny mari-pahaizana momba ny maripana dia mizara telo: ny refin'ny maripana (izany hoe ny maripana ambany indrindra amin'ny mari-pana, ny fàfana ny mari-pana), ny maripanan'ny maripana (io mari-pana io dia mizara mizana avo sy ambany ihany koa amin'ny mpamokatra sasany, mampiasa manga ka hatramin'ny voasary. mari-pana), ary ny maripanan'ny maripana ambony indrindra (mampiasa bara hafanana mena).
Teo aloha: Mpanamboatra 2020 ambony 90% nidina feno kitapo fatoriana miaraka amin'ny vidin'ny fifaninanana
Manaraka: Kitapom-basy vita amin'ny camouflage tsy azo tanterahina rip-stop kitapo fatoriana miaramila ho an'ny toetrandro mangatsiaka be